ပထမ ဦး ဆုံးအဖြစ်အပျက်သည်အာဖရိကတိုက်ကြီးဖြစ်သည့် TELES RELAY တွင်ဖြစ်သည်
ပထမ ဦး ဆုံးအမှုအာဖရိကတိုက်ကြီးကနေအစီရင်ခံခဲ့သည်
လစ်ဗျားမှာထရီပိုလီမှာရှိတဲ့ Jeune Afrique မှာပိတ်မိနေတယ်
Lebledparle.com, FrançoisGaël Mbala
Published: ဖေဖော်ဝါရီလ 14 2020
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: ဖေဖော်ဝါရီလ 14 2020
အီဂျစ်ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်သောကြာနေ့တွင်ထုတ်ပြန်သောကြေငြာချက်တွင်၎င်းသည်အာဖရိကတိုက်တွင် coronavirus ကူးစက်မှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
ပုံရိပ်ရုပ်ပုံ (ဂ) အခွင့်အရေးရှိသည်
သူ၏နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်ကျားမမခွဲခြားဘဲ၊ Khaled Megahedကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသည်အီဂျစ်မဟုတ်ပါ
အာဖရိကတိုက်တွင်ပထမဆုံး coronavirus ကူးစက်ခံရသူကိုအီဂျစ်ကတင်ပြခဲ့သည် #Coronavius pic.twitter.com/EpPv3muyAC
- သတင်းအချက်အလက်မိနစ်🦠 (@InfosMinuts) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 14, 2020
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) သို့အကြောင်းကြားပြီးရောဂါလက္ခဏာမပြသောလူနာအားဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဆေးကုသမှုအတွက်သီးသန့်ထားရှိကြောင်း ၀ န်ကြီးဌာနမှပြောကြားခဲ့သည်။ " ၀ န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတည်ငြိမ်သည့်အမှု၏တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာသည် Khaled Megahed ကပြောပါတယ်
RTBF ၏အဆိုအရ# အဲဂုတ္တုပြည်၌ ၏နိုင်ငံများ၏တ ဦး တည်းဖြစ်ခဲ့သည်#Afrique လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်တင်သွင်းမှုအန္တရာယ်နှင့်ထိတွေ့မှုအများဆုံးသောသူများ။ https://t.co/7BvyWxRJMe #coronavirus #Covid-19
- Inter Courier (@courrierinter) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 14, 2020
ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတွင်အီဂျစ်သည်၎င်း၏အမျိုးသားကုမ္ပဏီ၏တရုတ်နှင့်လေယာဉ်ပျံသန်းမှုကိုဆိုင်းငံ့ထားကြောင်းသတိပြုပါ။ အီဂျစ်လူ ၃၀၀ ခန့်ကိုကယ်ဆယ်ခဲ့ရသည် ဖေဖော်ဝါရီလတွင်တရုတ်ပြည်၏ကူးစက်မှု၏ဗဟိုဗဟိုချက်ဖြစ်သည့်ဝူဟန်မှ ၁၄ ရက်ကြာကာရန်တင်ထားခြင်းခံရသည်။
သောကြာနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံသည်လူပေါင်း ၁၃၈၀ ခန့်ရှိသည့် Coronavirus ကူးစက်မှုနှုန်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ "ပုံတူပွားခြင်း" နှင့်အသစ်သောစာရင်းကိုင်နည်းလမ်း၏တစ်နေ့မတိုင်မီမွေးစားပြီးနောက်။ တရုတ်ပြည်မကြီး (ဟောင်ကောင်နှင့်မကာအိုမှအပ) ရောဂါကူးစက်မှုစုစုပေါင်းအရေအတွက်၊ "ပုံတူပွားခြင်း"ထို့အပြင် 63.851 မှာရပ်။
ရှိပြီးသား 5000 ကျော်မှတ်ပုံတင်ပြီး!
သတင်း အဆိုပါသွေးမိန့် မလွဲ!ကန်!
မိုက်ကယ် Avenatti - Nike ငွေညှစ်မှုစစ်ဆေးမှုတွင်စီရင်ချက်ချခဲ့သည် - xnxx
ကမ္ဘာ့ကင်ဆာနေ့ - ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏သတင်းစကား - ဗီဒီယို
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အိုင်ဗရီကို့စ် - Masa 2020 ကိုအနုပညာရှင် ၃၅၀၀ နှင့်အတူဖွင့်လှစ်လိုက်သည်